Hugawng kachin(Jinghpaw,singpo,jingphosu): မေ့မှာစိုးလို့သတိပေးတာပါနော်.
at 10/02/2013 08:08:00 AM
ကချင်တွေကို ချီးကျူးပါတယ်... နိုးဆော်ချင်ပါတယ်....
ဘယ်နေရာပဲ ရောက်ရောက် ကိုယ့်အမျိုးအကြောင်းကို စိတ်ဝင်စားတတ်လို့ပါ
သို့သော်...အကြောင်းအရာတွေ ထပ်လာတဲ့ အခါ တချို့ ငြီးငွေ့ သွားကြတာရှိ
လာတယ်...သေနတ်ပစ်ပြန်ပြီ၊ ဖြစ်ပြန်ပြီ ဒါတွေဟာ ကြားရသူအတွက်
အပ်ကြောင်းထပ်နေနိုင်ပေမယ့် တကယ်ဖြစ်နေတာကို မမေ့စေချင်ပါ၊၊ ကိုယ့်တိုင်း
ကိုယ့်ရွာ မှာဒုက္ခထည်လဲ ခံစားနေရတဲ့ အချိန်... ကိုယ်က ဗမာကောင်လေးကို
သတိရနေကြောင်း အရမ်းလွမ်းနေကြောင်း ပြောနေမိမလားလို့ပါ... အဲလိုသာဆိုရင်
<< တချို့  ဗမာစော်နံတဲ့ တိုင်းရင်းသားတွေကိုလည်း သတိပေးချင်ပါတယ် >>
ကိုယ်က ဘာလုပ်နိုင်မှာမို့လဲ လို့မေးစရာရှိပါတယ်၊၊ လူတစ်ယောက် ကို နုတ်ပိတ်
ဖို့ လွယ်ပါမယ်...သို့သော် လူတစ်ထောင်ကို နုတ်ပိတ်ဖို့ခက်ပါတယ်၊၊ ကချင်တွေ
အားလုံး ကချင်မှာ ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာ မျက်စိတုတ်ထောက် ကြည့်နေကြတယ်
ဆိုတဲ့ အရှိန်ကို မလျော့စေချင်တာပါ၊၊ လူတွေသိနေတဲ့ ကိစ္စကို ဇွတ်မလုပ်ရဲဘူး..
၂ နှစ်ကြာလာတဲ့ တိုက်ပွဲမှာ ၂၀၁၂ ဒီဇင်ဘာအပြင်းထန်ဆုံးနဲ့ လူထု စိတ်ဝင်စားမှု
အမြင့်ဆုံးပါ... Public Opinion ကို စစ်ခွေးမခံနိုင်ပါဘူး၊၊ KIA တော်လွန်းလို့ဆိုတာ
ထက် လူတွေကြည့်နေကြလို့ ဇွတ်မတိုးရဲတာလည်း ပါပါတယ်၊၊ KIA ကူပါကယ်ပါ
အော်ခဲ့တာ မဟုတ်ပါ၊၊ ပြည်သူလူထု တစ်ရပ်လုံးက တော်ပြီ ဆက်မပစ်နဲ့တော့ လို့
အော်ခဲ့တာကြောင့်လည်းပါတယ်၊၊ နိုင်ငံတကာက ဖိအားလည်းပါတယ်၊၊ ဆိုလိုတာ
က ငါတို့တွေ အမြဲတစေ နားစွင့်ထားဖို့လိုပါတယ်...
မေ့မှာစိုးလို့သတိပေးတာပါနော်..Yawng hpe chyeju dum nngai
Mymy Lay Thank you
Thantzin Than (Master Brain )
စစ်တပ်မရှိရင်နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးဘယ်သူလုပ်မှာလဲသိတဲသူရှိရင်ပြောပေးပါ။ (တွေ.ပြီ ဒီမှာခွေးတကောင်)
Pandora Angel re law .. Anhte W.P amyu sha ni myit hkrum tsaw ra lam she hpyen ni hpe awng dang na re .. kaga hpu nau ni hpe mung kasi kaja madun nga ga yaw
Trytotouch Sky let me share ah phu
Trytotouch Sky ma gam bung li n ngut shi jang sai n mai ka tsi mat ai ma gam bung li ngut kre sha shawng lam de yawng wa n gun da ting sha kut sa wa ga ngu yawng hpe ga saw dat ai
Ashin Min Gyi BE STRONG, BROS
Ashin Min Gyi ဗမာဖက်ဆစ်အစိုးရ တော်လှန်ကြ။ ဗမာဟူသမျှ မောင်းထုတ်ကြ။ ဒါမှ သင့် ရွာအေးချမ်းမည်။ စစ်သားတွေတင် မဟုတ်ဘူး။ဗမာ အရပ်သားဆိုလဲ လက်မခံနဲ့ ဗမာဟူသမျှ လူယုတ်မာတွေချည်းပဲ။ သွားမ ပေါင်းနဲ့ မှားသွားမယ်။ ကချင် မ တွေ နာမည်ကြီးတွေတောင် ဗမာ ယုတ် တွေနဲ့ယူနေတာ ရင် နာဖို့ကောင်းတယ်။ ဖင် ယားမ တွေအလိုက်ကန်းကိုမသိကြဘူး။ သိပ်မကြာသေးဘူး။kiA ကို အပြတ် တိုက် နေတဲ့ချိန်မှာ ဟို အဆိုတော်မ သောက် ရူးမက ဗမာယုတ် နဲ့လက်ထပ်ခဲ့တာ ငါ တော့သိပ်ဘဝင် မကျဘူး။ ဒါမျိုးမ တွေကြောင့် ခက်ပါတယ်ကွာ
Aung San ဘယ်တော့မှ မ မေ့ပါ
Kyaw Min ဗမာမကောင်းကြောင်းပြောနေတာလား ။
Fede Ral ဗမာမကြောင်းပြောရင်တနှစ်ပတ်လုံးပြောကုန်မှာမဟုတ်ဘူးဒါတောင်မအိပ်မှ
Kyaw Min ပြော ။ ပြော ။ မအိပ်နဲ့ ။ ဒီထဲရောက်တဲ့အထိပြော ။ ငပေါ ။ Fede Ral
Tsawra Tsaw ကြီးတော်ရဲ့ ဒိနေ့ စတေးတပ်စ် ကိုတွေ့လို့ လန့်ဖျန့် ရေးလိုက်တာမလား မှန်မှန်ပြော
Welkin Gyah Absolutely !! wherever you are, Always you must be noticed in your mind that Who you are & Where you from.
Ah Hpu Right both Tsawra Tsaw & Welkin Gyah
KO Chan ဗမာ ကတော့ ရုပ်မာကောက်ကြစ် ဖို့နှစ်ယောက်မရှိဘူး
Mg Kyaw Zwar KIA က ကချင်မတွေကိုတရုတ်ကိုပို့လို့ ကချင်မျိုးပါတုန်းတော့မယ်ဆိုတာကိုလဲ သိထားဦး။
Tsaw Brang တရုတ် ကိုပို့လည်း ကချင်အများကြီးပဲကိုယ့်လူမျိုးနဲ့ပဲညားမှာပဲ။
ကချင်ပြည်နယ် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ခွင့်မရသေးလို့တရုတ်နယ်စပ်(ပြည်)လို့ခေါ်ထားခြင်းသာဖြစ်တယ်။ ယခု ကချင်တွေအများစုနေထိုင်သော mangshi,shadan krung,yin chang နှင့်ကျန်နေရာများသည် ကချင်ပြည်များသာဖြစ်သည်။ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတဲ့နေ့ပြန်လည်အုပ်ခွင့်ပေးမည်ဟူ၍
11 hours ago via mobile · Unlike · 8
Naunau Mahaw Myit hkum ai WP annau ni
Freedom Shalom AH HPU,EXACTLY RIGHT.
Lahpai Seng ဘယ်ကောင်ဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်အမျိုးကိုချစ်တာလေးစားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ကချင် သူတောင်းစားအမျိုးမရှိပါဘူး။မဟာ ဗမာ လူမျိုးမှာတော့ ရှိလိမ်မယ်။ ဗမာစာကိုလေးရေးသပ်ဖတ်သပ်ပါတယ် နောင်တော် ဗမာတွင် ဘယ်လိုလေးမသိဘူး
WP LS ( ကိုယ့်တိုင်း
သတိရနေကြောင်း အရမ်းလွမ်းနေကြောင်း ပြောနေမိမလားလို့ပါ.) ဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ငါလည်း တချို့တစ်လေတော့ ကြားမိပါတယ် သို့သော အမျိုးတွေမို့လို့ ပြောရင်ကောင်းမလား မကောင်းလားတွေးရင်းမပြောဖြစ်ခဲ့ပါ နှောက်ပြီး ကိုယ့်တို့ရဲ့ အားနည်းချက်တစ်ချို့တွေလည်းပါနေမလားလို့ပါ ခွီးခွီး
All King ကိုယ် ကချင်နိင်ငံကို ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ဖို့ တာဝန်ရှိသည်
LS Mr-Chit Be Strong !
Aung Myo Lwin Canopus မမေ့ကြနဲ့ မိတ်ဆွေတို့ ခိုင်မာ တောင့်တင်း သထက် တောင့်တင်း အောင်သာ လုပ်ထား ကြပေတော့ မဟာ ဗမာ ဝါဒ လက်ခံသူနဲ့ စစ်ခွေး တွေ ဟာ တတန်းထဲပဲ သတိလဲ မလွှတ်စေနဲ့ ဥာဏ်နဲး သတိလွှတ်နေတဲ့ ရခိုင်အုပ်စု ကတော့ စစ်ခွေး ကျွန်ဖြစ်နေပြီ တိုင်းရင်းသား ကမန် လူ မျိုး တွေ ရဲ့ အဖြစ် ကို ကြည့် ပါအင်းအား နဲးပြီဆိုရင် နိုင်ငံတော် လို့ သူတို့ ကို သူတို့ သတ်မှတ်နေတဲ့ စစ်ခွေးများ နဲ့ တကွ စစ်ခွေ သမ္မတ ကြီးကို တိုင် ရှေ့တန်းထွက် စီစဉ် ညွှန်ကြား အမိန့်ပေး ပြီး ကမန်တွေ ကို မျိုးဖြုတ် နေပြီ ရှိသမျှ ဒေသခံ ဗမာ လူမျိုး မဟုတ်သူအားလုံး စစ်ခွေးများ မျှ ရှင်းပြစ်ချင်မည်သာ ထို့နောက် မဟာဗမာ လူမျိုး ကြီး ဝါဒ ကို သွတ်သွင်းမည်သာ ဖြစ်ပါသည် ဗမာ စစ်ခွေး ရန်က လွတ်ခဲ့တဲ့ ဒေသခံ တိုင်းရင်းသား မရှိပါ ရှေ့မှာ သက်သေ တပုံ ကြီး သင်တို့ ကချင် ဒေသအတွက် ကြိုးစားကြပါ အောင်မြင်ပါစေ
Munglai Hkyet ကချင် က မနော တီး မနော က တဲ့ အမျိုး ပဲ။ ဖြစ် ပြီဟေ့ဆိုတာနဲ့ ထိုင် မနေ ရပ် ကြ ည့်မနေဘူး ထ ပြီး ဝိုင်း လုပ် တဲ့ လူမျိုး။ ဆက်လက် ပြီး အရှိန် ကို ပိုမို မြင့်တင် လျှက် ကြိုးစား ကြ ပါစို့။